Igwe na akụrụngwa maka igwu mmiri na igwu mmiri nke ọma, ịkwọ ọkpọ nke ọma na ịsa ahụ nke ọma. Gụnyere ngwa ike na bit drill, pipe drill, core tube, fire frame, wdg.
Nhazi ọkwa: a na -ekekarị ya ka ọ bụrụ igwe na -agbagharị agbagharị, igwe na -agbagharị agbacha agbacha agbacha agbacha agbacha.
Rotary mkpọpu ala rig
A na -eme oghere olulu mmiri site n'imebi stratum nkume site na ntụgharị rotary nke ngwa mkpọpu ala. Ụdị igwe ndị na -egwu ala bụ nnukwu na obere igwe kpụ ọkụkọ kịtị, igwe na -egwu okirikiri dị mma ma tụgharịa, igwe na -egwu mmanụ isi, na igwe mkpọtụ rotary. Igwe a na -egwu ala dị mfe nwere naanị igwe na -egwu ala, igwe na -egwu olulu nwere ezigbo ihe mejupụtara mejupụtara ngwaọrụ mkpọpu na mgbasa nke ọma. Ngwa igwu ala nke tebụl rotary nke ọma igwe na -egwu mmiri gụnyere pipụ na -egwu mmiri. Dayameta ọkpọ ọkpọ a na -ejikarị bụ 60, 73, 89 na 114 mm. A na -ekewa ihe a na -egwu mmiri ụzọ abụọ: bitị mkpọtụ zuru ezu na bit bit.
Nnukwu na obere ihe mmụta cone
The conical mkpọpu ala ngwá ọrụ na -eji rotary ọnwụ ala oyi akwa. Dika nha ngwaọrụ a na -egwu ala, a na -akpọ ha nnukwu cone pot na obere ite cone, nke mmadụ ma ọ bụ ike nwere ike ibugharị ya. Ihe ndị a kpụkọrọ akpụkọ na -adaba n'ime ite ahụ, a na -ebulikwa ya n'ala ka ọ gbapụta ya. Ọdịdị ahụ dị mfe yana arụmọrụ ọrụ dị ala. Enwere ike iji ya naanị n'ozuzu ala ma ọ bụ stratum nwere dayameta okwute nke na -erughị 10 cm na ọdịnaya erughị 50%. Oghere oghere nke obere cone bụ 0.55M, na omimi omimi bụ 80-100m; Dayameta nke oghere ahụ bụ 1.1m na omimi omimi bụ 30-40m.
Rotary mkpọpu akwa maka ịsa nke ọma na apịtị mgbasa dị mma
Ihe mejupụtara ya bụ ụlọ elu, winch, tebụl rotary, ngwaọrụ mkpọpu mmiri, mgbapụta apịtị, mgbata na moto. N'oge a na -arụ ọrụ, igwe ọkụ na -ebugharị tebụl rotary site na ngwaọrụ nnyefe, ọ na -ebugharị mkpọtụ ahụ site na ọkpọ ọkpọ na -arụ ọrụ iji tụgharịa na ọsọ nke 30 ~ 90 rpm iji mebie stratum nkume. A na -awụpụ apịtị ma na -amanye ya site na mgbapụta apịtị, mgbe ahụ, a na -etinye ya n'ime oghere olulu mmiri site na mgbata dị n'elu ọkpọkọ olulu mmiri, na -agbada n'ime ntakịrị ebe a na -egwu ya, a na -ewepụkwa ya site na oghere iji mee ka ọ dị jụụ ma tinye mmanụ ahụ; A na -esi na olulu mmiri esi na olulu mmiri na -ewepụta oghere dị n'okpuru. Mgbe ị nọdụrụ na tank mmiri ahụ, apịtị ahụ na -alaghachi na tank apịtị maka imegharị.
Mgbasa ozi azụ azụ apịtị na -asachapụ ihe na -egwu olulu mmiri
Ọnọdụ mkpọmkpọ ebe na ihe owuwu bụ otu ihe ahụ dị n'elu, mana ụbara mgbasa apịtị dị iche. Mgbe ọ gbatasịrị na tankị edozi, apịtị na -esi na olulu mmiri na -asọba na ala olulu mmiri ahụ, apịtị na -ebupute ibe ya na -esite n'olulu mmiri na -amịpụta ya site na oghere mkpọpu mmiri n'ime oghere dị n'ime ọkpọ ọkpọ wee laghachi tank a na -edozi. A na -akpọ ụzọ a ka ọ na -agbapụta mgbagharị azụ. A pụkwara iji mgbapụta ahụ gbanye mmiri nrụgide site na ala olulu mmiri ahụ n'ime oghere dị n'ime ọkpọ ọkpọ ahụ site na oghere iji mepụta mmiri na -ebili elu na -ebu mkpuru osisi, nke a na -akpọ mgbagharị azụ azụ. Igwe a na -egwu mmiri nwere ike mepụta oke ọsọ na -ada n'ime ọkpọkọ a na -egwu mmiri, ma nwee ikike siri ike ịkpụcha okwute na okwute, yabụ ọsọ ọsọ na -agba ngwa ngwa. Ọ dị mma maka akwa ala, akwa ájá dị n'ozuzu na nhazi rụrụ arụ ebe dayameta nke obere okwute dị obere karịa dayameta nke ime ọkpọ. Dayameta dị n'ime ọkpọ ọkpọ a na-eji ebu ibu, n'ozuzu 150-200 mm, nke kacha bụ 300 mm. Agbanyeghị, n'ihi mmachi ịmịpụta mmiri ma ọ bụ ikike nnyefe nrụgide, ịdị omimi na -adịkarị ala karịa mita 150, na mwepụ mgbawa dị elu mgbe omimi olulu mmiri erughị mita 50.
Rotary mkpọpu ala maka mkpakọ ikuku ọma flushing
Ọ na -eji mpịakọta ikuku kama mgbapụta apịtị na ikuku mkpakọ kama iji apịtị na -asacha nke ọma na igwe na -egwu mmiri. A na -ejikarị mgbasa ntụgharị azụ, nke a makwaara dị ka ntụgharị ikuku na -ebuli ikuku. Nke ahụ bụ, a na-eziga ikuku mkpakọ na ụlọ ikuku na-agwakọta mmiri n'ime olulu mmiri site na pipeline ikuku iji jikọta ya na mmiri dị na ọkpọkọ mmiri iji mepụta mmiri aerated na nnukwu ike ndọda na-erughị 1. N'okpuru ike ndọda. Omume nke kọlụm mmiri kwa afọ na gburugburu ọkpọkọ olulu mmiri, mmiri aerated n'ime ọkpọ mmiri na -ebuputa mkpụmkpụ ma na -apụta n'ime olulu mmiri ahụ, na -asọba n'ime tank sedimentation, na mmiri mgbe sedimentation na -alaghachi n'olulu mmiri site na ike ndọda. Mgbe omimi nke ọma karịrị mita 50, ikike mwepụ nke ụdị mkpọpu mmiri a dị ukwuu karịa nke mkpọpu mmiri na mgbapụta mmiri ma ọ bụ mgbasa ikuku na -agbagharị, yabụ ọ dabara maka ọnọdụ nke nnukwu olulu mmiri, mpaghara kpọrọ nkụ. na ụkọ mmiri na ala oyi kpọnwụrụ na mpaghara oyi.
Hydraulic ike isi akuakuzinwo
Ụdị rotary mkpọpu ala rig. Ọ bụ ụgbọ ala hydraulic na -ebugharị ya site na onye na -ebelata ya, isi ike na -agbago na ala n'akụkụ ụlọ elu na -anọchi turntable na pọmpụ na igwe na -egwu olulu mmiri iji chụpụ ọkpọ mmiri na -akụ ya ka ọ tụgharịa ma bee akwa nkume. Enwere ike iji nnukwu olulu mmiri nwere dayameta nke 1m wee gwuo olulu mmiri buru ibu. Ihe e ji mara ya bụ ịgba ọsọ ngwa ngwa, mgbakọ dị mfe na ịtọpụ ihe ndị na -egwu olulu na ịpị ọkpọkọ ọma, ọ dịghị mkpa ibuli ngwaọrụ mkpọpu ala mgbe ị na -agbatị ọkpọ ọkpọ, yana ọtụtụ ihe ndị dị ka mgbago elu, ihe na -ebuli elu, ihe ntụgharị, mgbata na Kelly. ẹse.
Ala oghere vibration rotary mkpọpu ala igwe
Ọ bụ ụdị rotary mkpọpu ala nke na -agwakọta vibration na rotary ngagharị ka akuaku nkume stratum. Ngwaọrụ a na -egwu olulu nwere bit drill, vibrator, mwepụ vibration na cylinder ndu. Ike na -akpali akpali nke vibrator mepụtara na -eme ka ngwa mkpọpu ala niile na -efegharị. A na -awụpụ ihe mmịfe ahụ n'èzí shei nke vibrator site na mgbanaka esemokwu. N'otu aka ahụ, ọ na -ama jijiji na vibrator na okirikiri kwụ ọtọ nwere ugboro ihe dịka 1000 rpm na njupụta nke ihe dịka 9 mm; N'aka nke ọzọ, ọ na-eme ngagharị ngagharị dị ala nke 3-12 RPM gburugburu axis nke vibrator iji mebie okwute, ebe ọkpọ ọkpọ anaghị agbagharị, ma na-eji ihe na-ewepụ mkpọtụ iji zere ibunye ịma jijiji na mkpọtụ. ọkpọkọ. A na -eji usoro ịgbasa ikuku tụgharịrị emegharị ka a na -asacha olulu mmiri, nke mere na a na -ewepụta mkpụrụ ahụ n'ime olulu mmiri site na ọkpọ na oghere ọkpọ n'ime etiti vibrator. Ụdị mkpọpu a nwere nhazi dị mfe yana arụmọrụ mkpọtụ dị elu. Oghere oghere ahụ bụ ihe dịka 600mm na omimi omimi nwere ike iru
Nke gara aga: Pipe mmiri nke ọma
Osote: Mgbasa onu oghere